Filaza toe-javatra - Wikipedia
Ny filaza toe-javatra dia endriky ny matoanteny izay matetika afaka mitana ny anjara asan'ny fameno toe-javatra. Ahitana filaza toe-javatra ny fiteny latina, frantsay, anglisy, espaniola, portogey, rosiana, italiana, romaniana, katalàna, sns, nefa tsy mitovy ny anjara asa sahanin'ny matoanteny amin'ny filaza toe-javatra ao amin'ny fehezanteny isam-piteny.
1 Ny filaza toe-javatra ao amin'ireo fiteny romana
1.1 Ny filaza toe-javatra ao amin'ny fiteny latina
1.2 Ny filaza toe-javatra ao amin'ny fiteny frantsay
1.3 Ny filaza toe-javatra ao amin'ny fiteny anglisy
1.4 Ny filaza toe-javatra ao amin'ny fiteny espaniola
1.5 Ny filaza toe-javatra ao amin'ny fiteny portogey
1.6 Ny filaza toe-javatra ao amin'ny fiteny italiana
1.7 Ny filaza toe-javatra ao amin'ny fiteny katalàna
1.8 Ny filaza toe-javatra ao amin'ny fiteny romaniana
Ny filaza toe-javatra ao amin'ireo fiteny romanaHanova
Ny filaza toe-javatra ao amin'ny fiteny latinaHanova
Ny filaza toe-javatra amin'ny fiteny latina dia miafara amin'ny -andum na -endum (arakaraka ny matoanteny) sady miolika araka ny anjara asa sahaniny izy tahaka ny anarana. Ampiasaina hisahana anjara asa hafa tsy ny lazaina sy ny fameno zoina mivantana izy. Ampiasaina tahaka ny tambinteny koa izy ka miova ho -ando na -endo (arakaraka ny matoanteny) ny fiafarany.
Ny filaza toe-javatra ao amin'ny fiteny frantsayHanova
Ao amin'ny teny frantsay dia atao hoe filaza toe-javatra (frantsay: gérondif) ny ova-matoanteny ankehitriny (-ant) ialohavan'ny mpampiankin-teny en (ohatra: en chantant). Raha heverina ho fehezankevitra ny tarika matoanteny amin'ny filaza toe-javatra dia tsy ho fehezan-kevitra mahaleo tena izany fa fehezankevitra miankina. Ny lazaina (na lafika) miaraka amin'ny matoanteny amin'ny filaza toe-javatra dia mitovy amin'ny lazaina an'ny fehezankevitra iankinany ka tsy ilaina ny haverenana azy indroa. Sady miasa amin'ny maha matoanteny azy ny matoanteny amin'ny filaza toe-javatra no miasa tahaka ny tambinteny. mitana ny anjara asa mpamari-toe-javatra izy.
Ampiasaina hilazana ny fiaraha-misehon'ny asa na toetra lazainy amin'ny asa na toetra lazaina ao amin'ny fehezankevitra inankinany ny matoanteny amin'ny filaza toe-javatra. Ohatra: En rentrant, j'ai croisé mon père ("Nifanena tamin-draiko aho rehefa nody").
Amin'ny fiteny frantsay dia misy filazam-potoana roa ny filaza toe-javatra, dia ny ankehitriny (ohatra: en chantant) sy ny lasa (en ayant chanté).
Ny filaza toe-javatra ao amin'ny fiteny anglisyHanova
Ataon'ny fitsipiteny anglisy mahazatra hoe gerund ny endri-matoanteny miafara amin'ny hoe -ing amin'ny terana manokana ao amin'ny fehezanteny. Afaka mitana anjara asa maro kokoa noho ny gerondif frantsay ny gerund anglisy. Ohatra:
Playing on computers is fun. (Lazaina)
I like playing on computers (Fameno iharana)
Computing is fun. (Lazaina)
I like computing (Fameno iharana)
Amin'ny fitsipiteny mahazatra dia tsy atao hoe gerund fa participle (ova-matoanteny) ny matoanteny arafitra ao amin'ny fehezanteny toy izao:
Ny filaza toe-javatra ao amin'ny fiteny espaniolaHanova
Ny gerundio espaniola dia miafara amin'ny -ando na -iendo.
Ny filaza toe-javatra ao amin'ny fiteny portogeyHanova
Ny gerúndio portogey dia miafara amin'ny -ando, -endo na -indo
Ny filaza toe-javatra ao amin'ny fiteny italianaHanova
Ny gerundio italiana dia miafara amin'ny -ando na -endo. misy filazam-potoana roa ny gerundio italiana, dia ny gerundio presente (ohatra: facendo) sy ny gerundio passato (ohatra: avendo fatto).
Ny filaza toe-javatra ao amin'ny fiteny katalànaHanova
Ny gerundi katalàna dia miafara amin'ny -ant na -ent.
Ny filaza toe-javatra ao amin'ny fiteny romanianaHanova
Ny gerunziu romaniana dia miafara amin'ny -ând(u) or -ind(u).
Filaza tsy mitanisa
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Filaza_toe-javatra&oldid=966465"
Dernière modification le 22 Febroary 2019, à 11:04
Voaova farany tamin'ny 22 Febroary 2019 amin'ny 11:04 ity pejy ity.